Global Voices teny Malagasy » Nizeriana ‘Evanjelistran-kolontsaina’ Mampiroborobo Ny Teny Afrikanina Amin’ny Alalan’ny Fampiharana sy Fitantarana Nomerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Febroary 2017 8:10 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Nizeria, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Monina ao Lagos, Nizeria, i Adebayo ary Yoruba  no tenin-drazany, teny ampiasain'ny olona eo ho eo amin'ny 30 tapitrisa eo. Efa-taona lasa izay no nahaliana azy amin'ny fampiasana ny teknolojia handrisihana ny zana-drahalahiny sy ny ankizy mpiray vodi-rindrina aminy mba hianatra ny fiteny. Amin'ny maha mpanorina ny Genii Games , nanangana ny fampiharana fampianarana teny sy sarimiaina amin'ny teny Yoruba sy teny Nizeriana sy Afrikanina hafa, ny ekipany. Araka ny fijerin'i Adebayo, lasa fitaovana lehibe mahatonga ny fianarana ny teny ho “mahafinaritra, manintona sy mampavitrika” ny teknolojia:
Natao ho an'ny ankizy, maka ny endrika “fitadiavana anjoria mahafinaritra” ny iray amin'ireo fampiharana momba ny teny, Igbo 101. Afaka mandroso amin'ny alalan'ny fifehezana ny teny ny mpiserasera no sady mahavita ny dingana farany mahazo ny fanomezana “Amamiihe”, izay midika hoe fahaizana ny teny Igbo. Namoaka ny endrika faharoa nohavaozina ny fampiharana ary azo jerena amin'ny Android sy iOS. Misy ihany koa ny fampiharana fianarana teny hafa ho an'ny Yoruba  sy Haoussa .
Raha hanangana ireo fampiharana fianarana ny teny, mila ekipa programera, mpanao sary, mpanakanto am-peo, injenieran'ny feo sy mpampianatra teny hananganana ny singa rehetra. Tena ilaina indrindra ny manampahaizana momba ny teny amin'ny dingana hifehezana ny singam-peon'ny teny Nizeriana, izay miparitaka amin'ny alalan'ny tenim-paritra isan-karazany marobe. Voarakitra tsara ny navoaka tamin'ny lahatsoratra “What Does It Take To Build An App (Inona no atao raha hanangana fampiharana )” tao amin'ny bilaogy Genii Games izany dingana izany.
Mifototra amin'ny fahombiazan'ireo atrikasa ireo, nitarika hetsika tahaka izany ihany koa izy  tao Johannesburg, Afrika Atsimo, niara-miasa amin'ny iAfrikan , Who Are We Africa , Macroscopia Labs  ary nampiantranoin'ny Jozihub , izay tafiditra amin'ny fetin'ny Tanora (Youth Day). Ankizy enina amby roapolo avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra anankiroa ao Soweto no nandray anjara tamin'ny endrika rehetra n'ny famoronana lahatsary 90 segondra momba ny Umngqusho , foto-tsakafo malaza avy any Afrika Atsimo. Ankoatra ny fahitana hevitra fitantarana, nandravaka ireo mpilalao fototra ny ankizy, ary nanome feo ho an'ireo mpilalao fototra ireo. Azo jerena eto amin'ity lahatsary Youtube manaraka ity ny vokatra farany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/11/95138/
 Genii Games: http://www.geniigames.com/
 What Does It Take To Build An App (Inona no atao raha hanangana fampiharana: http://www.geniigames.com/what-does-it-take-to-build-an-app/
 atrikasa valo miaraka amin'ireo sekoly eny ifotony manerana an'i Nizeria : https://medium.com/@adebayoibidapoadegbembo/diary-creating-impact-with-african-stories-phase-i-50c3f92cf945#.timy2yaam
 hetsika tahaka izany ihany koa izy: http://www.geniigames.com/cartoons-demystifying-the-digital-storytelling-process/
 Who Are We Africa: https://twitter.com/whoarewe_africa
 Macroscopia Labs: http://www.macroscopia.com/
 nandray anjara tamin'ny endrika rehetra: http://www.geniigames.com/digital-storytelling-workshop-johannesburg/